Midawga Yurub oo ka hadlay xaaladda Soomaaliya | KEYDMEDIA ONLINE
Midawga Yurub oo ka hadlay xaaladda Soomaaliya
Midawga Yurub ayaa qoraal ka soo saaray xaaladda siyaasadeed ee dalka Soomaaliya, xilli ay isi soo tareyso qeylo dhaanta la xiriirta boobka kuraasta Gollaha Shacabka.
BRUSSELS, Belgium - War qoraal ah oo ka so baxay Ururka Midawga Yurub ayaa lagu soo hadal qaaday, halka ay mareyso xaaladda siyaasadeed ee dalka Soomaaliya iyo muhiimadda ay leedahay in la dhameeyo khilaafka jira.
Waxa ay ugu baaqeen dhinacyada Soomaalida in la xalliyo tabashooyinka jira, isla markaana si deg deg ah loo dhameeyo doorashada dalka, si looga baaqsado xasillooni darro.
Midawga yurub ayaa sheegay in ay lagama maarmaan tahay in dalku uu yeesho hoggaan cusub inta aan la gaarin sanadka ina soo aaddan ee 2022, taasoo iminka ay ka harsan tahay 1- bil iyo maalmo.
Ururka ayaa tilmaamay in ay si dhaw ula socdaan xaaladda cakiran ee siyaasadda Soomaaliya, taasoo sida ay sheegeen dhaawaceysa dib u soo kabashada uu dalku ku jiray,
Midawga Yurub ayaa sidoo kale ku xusay in xaaladaha abaaraha iyo amni darrada ka jira gudaha Soomaaliya,iyagoo muujiyey sida ay ugu xun yihiin weeraradii ugu danbeeyey ee ay Kooxda Al-Shabaab ka gaysteen gudaha dalka.
Warka ka soo baxay Midawga Yurub ayaa lagu soo dhaweeyey, habkii loo xalliyey khilaafkii hore uga dhaxeeyey Madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday iyo Ra'iisul Wasaaraha xil-gaarsiinta, kaasoo sida ay sheegeen curyaamin lahaa arrimaha doorashooyinka.
Saxiibada Soomaaliya oo iyaguna warsaxafaadeed si wadajir ah u soo saaray maanta ayaa carabaka ku dhuftay, in la dhammaystiro doorashada Gollaha Shacabka, isla markaana ay noqoto mid loo dhan yahay, oo ay ku qanacsan yihiin daneeyayaasha siyaasadda iyo shacabka Soomaaliyeed.
Midawga Yurub ayaa Soomaaliya ka taageera arrimo kala duwan, oo ay ugu horreyso dib u dhiska ciidamada, iyo dhaqaalaha ku baxa, waxaana marxaladda iminka taagan haddii ay sii socoto, adkaan doonta kalsoonidii ay ku qabeen hannaanka dowladnimo ee Soomaaliya.